Iindaba - Uyichitha njani iKrisimesi emnandi kumazwe ahlukeneyo?
Uchitha njani iKrisimesi emnandi kumazwe ahlukeneyo?
Ikrisimesi emnandi mhlobo wam,
Sele kuphakathi kuDisemba. Ngaba ikrisimesi ikude?
Phambi kokuba kufike iKrisimesi, sininqwenelela ukungxama kwaye sininqwenelela umsebenzi owonwabisayo kunye nosapho olonwabileyo kunyaka omtsha
Enkosi ngosithathela ingqalelo kwaye sinethemba lokuba siza kuphinda sitshintshisane ngo-2021.
Makhe sithethe ngakumbi malunga nesiko leKrisimesi kumazwe ahlukeneyo.
Wamkelekile ukushiya umyalezo kwaye uncokole malunga namasiko awahlukeneyo.
1. Inkqubo ye IBritaneabantu banikela ingqalelo kakhulu ekutyeni ngeKrisimesi. Ukutya kubandakanya ihagu eyosiweyo, iturkey, ipudding yeKrisimesi, ipayi yenyama yeKrisimesi, njl.njl. Zonke izipho zisiwa ngeKrisimesi kusasa. Ezinye iimvumi zeKrisimesi zihamba emnyango zicula iindaba ezimnandi kwindlu ngendlu. Baza kungeniswa endlwini ngumbuki zindwendwe ukuze abonwabise ngeziphungo okanye anike izipho ezincinci.
2. Kungenxa yokuba eunited States lilizwe elinamaqela amaninzi obuhlanga, iimeko apho amaMelika abhiyozela iKrisimesi ikwangoyena mntu unzima. Abaphambukeli abavela kumazwe ahlukeneyo basalandela amasiko kumazwe abo. Nangona kunjalo, ngexesha leKrisimesi, ii-garland kunye nolunye uhlobiso olwahlukileyo ngaphandle kweminyango yamaMelika ziyafana.
3. Umntu ophakathi ophakathi Fransi uphantse waya ecaweni ukuya kwizimvo zobusuku ezinzulwini zobusuku ngeKrisimesi. Emva koko, usapho lwaya kwindlu yomntakwabo okanye udade wabo omdala ukutshata kwakhona. Le rally ibimalunga nokuxoxa ngemiba ebalulekileyo ekhaya, kodwa ukuba bekukho amalungu osapho angavumelaniyo, ukungavisisani kuye kwakhululeka emva koko. Wonke umntu kufuneka axolelaniswe njengangaphambili, ke iKrisimesi lusuku oluhle eFrance.
4. Abantwana kwi Speyin uya kubeka izihlangu ngaphandle komnyango okanye kwefestile ukufumana izipho zeKrisimesi. Kwizixeko ezininzi kukho izipho zabantwana abahle kakhulu. Iinkomo nazo zaphathwa kakuhle ngalo mhla. Kuthiwa xa uYesu wayezalwa, inkomo yaphefumlela kuye ukuze ifudumale.
5. Yonke into IsiTaliyani Usapho lunomzekelo webali lokuzalwa. Ngobusuku beKrisimesi, usapho lwadibana kwakhona kwisidlo esikhulu kwaye laya kwiMisa yeKrisimesi ezinzulwini zobusuku. Emva koko, ndaya kutyelela izalamane nabahlobo. Ngabantwana nabantu abadala kuphela abafumene izipho. NgeKrisimesi, amaTaliyane anesiko elihle kakhulu. Abantwana babhala izincoko okanye imibongo ukuvakalisa umbulelo wabo kubazali babo ngokukhuliswa kwabo kunyaka ophelileyo. Imisebenzi yabo yayifihliwe kwi-napkins, phantsi kweepleyiti okanye amalaphu etafile ngaphambi kokutya isidlo sangokuhlwa seKrisimesi, kwaye abazali babo benza ngathi ababoni. Emva kokuba begqibile ukutya, babuya nayo baza bayifundela wonke umntu.
6. Inkqubo ye AbaseSweden banobubele kakhulu. NgeKrisimesi, icacile. Intsapho intle. Nokuba usisityebi okanye ulihlwempu, izihlobo zamkelekile, kwaye nabantu ongabaziyo banokuhamba. Zonke iintlobo zokutya zibekwe etafileni ukuze kutyiwe nabani na. .
7. Dominikha yaqala yazisa iKrismesi
izitampu kunye nezitampu zokulwa isifo sephepha, ezakhutshwa ngenjongo yokunyusa ingxowa mali yokulwa isifo sephepha. Akukho sitampu kwi-imeyile yeKrisimesi ethunyelwe nguDanes. Abo bafumana ii-imeyile baya kuziva ngathi bayathanda xa bebona izitampu zeKrisimesi ezingakumbi!